‘परिवार’ भन्दै पारस शाहले शेयर गरे हिमानी नाचेको भाई रल भिडियो !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/‘परिवार’ भन्दै पारस शाहले शेयर गरे हिमानी नाचेको भाई रल भिडियो !!
हिमानी नाच्दै गरेको उक्त भिडियो उनकी छोरिहरु पुर्णिका शाह र कृतिका शाहको अफि`सियल टिक टक एकाउन्टमा अप्लोड गरिएको थियो । अप्लोडको केही घन्टा बित्न नपाउदै भिडियोहरु एकाएक सामाजिक संजालमा भाईरल हुन थालेको थियो । हाल यो समाचार तयार गर्दै गर्दा सोही भिडियोको कारण पुर्णिकालाई पछ्याउनेको संख्या ५० हजार माथी छ ।
जबकी उक्त भिडियो अप्लोड गर्नुअघि उनलाई फलो गर्नेको संख्या ८/९ हजारको हाराहारीमा थियो । त्यस्तै कृतिकाको पनि टिकटक एकाउन्टमा फलो गर्नेको संख्या व्हात्तै बढेको छ । भिडियो अप्लोड अघि ६/७ हजारको हा`राहा रीमा फलोवर्सहरु रहेकोमा भिडियो भाईरल हुँदै गर्दा अहिले २० हजार माथिले कृतिकालाई पछ्याएका छन् ।